Tahriibayaal Soomaali ah oo maanta laga dejiyay M/Hargeysa. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 24, 2017
Dalka Turkiga oo xariir wanaagsan la leh Soomaaliya ayaa dib u soo celiyay Tahriibayaal Soomaali ah oo ku wajahnaa dalalka yurub kuwaas oo manta laga soo dejiyay Garoonka Magaalada Hargeysa ee Soomaali-land.
Inta la xaqiijiyay 28 Ruux Soomaali oo Tahriibayaal ahaa ayaa Soomaaliya Dib loogu celiyay kadib Markii Poliska dalka Turkiga ay ka qabteen Gudaha dalkaas.
Dadka la soo celiyay ayaa mudo Labo bil ah Xabsi ku qaatay Gudaha Turkiga, iyadoona Xusid Mudan in Dadkaasi ay Markii hore ay Turkiga ay ku yimadeen lacag Dhan $8,000 sida booliska ay sheegeen.
Diyaarad ayaa kasoo qaaday Magaalada Istanbul Waxay Transit Dhowr sacadood ah ay ku qateen Magaalada Abu Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka kadib Markii ay Boos ay ka wayeen Flightkii Toos Muqdisho usoo aadayayay Saakay Magaalada Hargaysa ayaa laga Dajiyay .
Turkiga oo xuduud la leh Wadamada yurub ayaa sanadihii la soo dhaafay marin u ahaa Qaxootiga ku soo qul qulaya Qaaradda yurub waana markii ugu horeysay oo dib loo soo celiyo tahriibiyaashaan Soomaalida ah.
Maxaabiis ku geeriyootay Xabsiga dhexe ee Muqdisho